Maqaalo – hareerley News
Sidee ayay jasiiraddii kaneecada badnayd Ee ay Malaysia cayrisay oo ka saartay Midowgoodii, ku noqotay dal kamida dunida koobaad? Yaase dhabaha guusha qaadsiiyay? Maxaanse ka baran karnaa?.
Singapore waa dal yar oo hal magaalo ah (city-state) kaasoo ah jasiirad yar oo dhacda koonfur-bari qaaradda Eeshiya. Waa dal baaxad ahaan aad u yar oo ku fadhiya bed dhan 722km oo wareeg ah. Magaalada Darisalam ee Tanzania ayaa baaxad ahaa ka weyn. Singapore waa jasiirad kaabiga ku haysa Malaysia. Dadka wadanka daga waa Chinese, […]
(Madaxweyne Sankara ):-Ninkii Diidey in uu Gacanta u hoorsado Reer Galbeedka:-(Akhriso)
Madaxdii gumaysi diidka geesiyada ahaa ee soo maray qaarada afrika marka laga hadlayo taariikhdooda waxaa safka hore kaga jira Madaxweynihii hore ee dalka Burkinofaso Thomas Sankara oo talada wadankiisa qabtay sannadkii 1983-dii xiligaas oo uu ahaa nin dhalinyaro ah oo da’diisu ahayd 33 sano jir. Hogaamiye Sankara wakhtigaas waxyaabihii ugu horreeyay ee uu qabtay markii […]
(Akhriso):-Wiil u dhashey Dalka Arjantiin Oo Dukaan Ukun ka Qaatey Maxaa Xiga….
Wiil u dhashay dalka Arjantiin ayaa galay dukaan lagu iibiyo Ukun markii sallad ukun ah uu soo dajistay ayaa milkiilihii ku war galiyay in qiimihii hore wax iska badaleen oo uu qiimo ku darsamay..!!! Isaga oo aan erey dhihin ayuu ku celiyay Ukunta halkii uu ka soo qaadat,deetana yiri “La”aanteed waa noolaan karaa”..!!! Qiima kororkaasi […]
Posted on August 5, 2019 August 5, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
(Akhriso):-Aduunka si deg deg ah ayuu isku badalayaa.
1988 shirkad Kodak la yiraahdo waxaa u shaqeyn jiray 170kun oo shaqaale waxayna soo saari jiray aalad walbo wax lagu sawiro waxaana la aasaasay 1890 laakiin markii 2004ta ahayd shirkadii way kacday oo way falistay, waxa shirkadaas ku dhacayna shirkado badan ayuu ku dhici doonaa. Programingka ayaa dhib wayn u geystay sababtoo ah mobeel walbo […]
Wax ka ogow mucjisooyinka ku meersan meeraha saxal “saturn” (WQ: Rashiid Odowaa)
Meeraha (Saxal,Sukhra,ama Cirjiidh magacyada) ay inta badan Somalidu u taqaanno,dhinaca Cilmigana loo yaqaan Saturn,waa meeraha lixaad ee bahda cad-ceedda,waa Xidigta midabka Jaalaha ama Hurdiga ah leh ee habeenkii ka dhalaasha dhinaca Bari ee cirka,meerahana ama Xiddigan oo illaa casri jaahiligii la yaqaannay,waxa uu masaafo ahaan u jiraa dhulkeenna qiyas dhan 1.2 bilion km waa meeraha […]
12 Arriimood oo keeni kara in wax Akhriskaagu Yaraado Qaybtii 5aad (WQ: Mubarak Hadi)
FG: HADDII AAD MAQAALAKAN KOOBAN DHAMMAYN KARI WAYDO, ADIGUU KAA HADLAYAA! Arrinta toddobaad ee keeni karta in akhriskaagu yaraado, waxa weeye badshada baraha bulshada (social media). Siyaabooyin fara badan buu baraha bulshadu akhriskaaga u saamayn karaa, laakiin arrinta muhiimka ah ee aan jeclahay in aan qodobkan ku xuso waxa weeye, saamaynta ay ku yeelan karto […]
Arimaha Bulshada Maqaalo Ra'yiga
Qorshe uu damacsanaa Axmed Madoobe oo si weyn looga horyimid
Qaar kamid ah xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya ee kasoo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay qorshe ay sheegeen in madaxweyne Axmed Madoobe uu ka damacsan yahay soo xulista Xubnaha baarlamaanka. Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inaysan ku qanacsaneyn habka […]